A ndu maka beginners seksvayf
Psychology na mmekọrịta Mmekọahụ
Sekvayf - kedu ihe ọ bụ na otu esi eme seksvayf?
Emancipation na mmekọahụ nke di na nwunye ọ bụla na-adabere na ndị mmekọ abụọ. Onye na-anọgide na-adị ọcha, na oge ọ bụla - dị ka nke mbụ. Ndị ọzọ, n'ụzọ dị iche, na-enwe obi ụtọ ịnwale ihe ọhụụ ọhụrụ, ngwaọrụ ma ghara itinye aka na nyocha. N'ọgbọ nke nchọpụta mmekọahụ, subculture seksvayf, nke dabeere na ịkwa iko, agbasawo.
Kedu ihe bụ seksweif?
Maka ezumike oge, ịrara onwe gị ụgha bụ ihe ọjọọ, mana mgbe ị na-enwe mmekọahụ, iwu anaghị arụ ọrụ mgbe nile: naanị iji mee ka ndị mmekọ na-emekọ ihe ma ghara ịgabiga ókè nke onwe ha. Ònye bụ seksvayf (site na English sexwife, "nwunye-sexy")? Otu nwanyị lụrụ di, bụ onye, ​​na nkwenye nke di ya ma ọ bụ nwunye ya, na-eji ọchịchọ obi abanye n'ime mmekọahụ na otu ma ọ bụ karịa ụmụ nwoke. E nwere ụdị dịgasị iche iche nke mmekọrịta dị otú ahụ:
enwere mmekọahụ na ọnụnọ nke di ya (ntụziaka nke ụmụ nkịta sitere na English cuckold "cuckold");
nwoke na nwanyi na-enwe mmekorita onwe ha nke oma (Gyeonggi-beng, "grupovukha", MZHM, wdg);
nwanyị ahụ na-aga onwe ya na-akpachi anya, na-enye ma ọ bụ na enyeghị "akụkọ banyere ọrụ a".
Ihe ngosi nke mmekọahụ
Meghee mmekọrịta seksvayf - ọ bụghị maka onye ọ bụla, mana dịka iwu, ndị mmekọ na-eme ha, na-edozi ihe dị n'etiti nragha n'azụ na "kwere." Nke a nwere ike ime ka obi dị gị mma, ma ọ bụghị imebi ezinụlọ. Iji ghọta na di na nwunye nwere mmekọahụ, nwanyị ahụ dị njikere ịnwa ọrụ nwa agbọghọ ahụ na-akpọ, ọ ga-ekwe omume na ihe ndị na-esonụ:
Nkwado nke nwoke na nwanyị na mgbanwe nke ndị mmekọ.
Njikere maka ule na inwe mmekọahụ.
Ndị di na nwunye a bụ ndị na-egwu porn (video vidio).
Otu nwanyị nke na-achọ ịchụ nta na-agwa di ya banyere ndị mmekọ oge gara aga.
Ọ na-esekarị ndị nnọchiteanya nke nwoke na nwanyị.
Kedu ihe bara uru seksweif?
N'ọtụtụ, egwuregwu mmekọahụ na mgbanwe nke ndị nwunye na-akpata nhụsianya na oke iwe, ma otu nwere ike ịhụ uru nke ịme ụdị ụdị mmekọrịta ndị a. Di na nwunye nke nwere ihe ha bu n'echiche di iche iche nwere nsogbu di iche iche, esemokwu, ma karia otutu uzo ndi ozo enweghi nrapu. Gịnị ma ọ bụrụ na nwanyị nwere mmekọahụ nwere ike ịkpọ onye nke atọ? Egwuregwu dị otú ahụ nwere ike ịzọpụta ezinụlọ na n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, mgbe nwunye bụ nymphomaniac, di ahụ enweghikwa ike ikwekọ ya. Gịnị ka seksvayf pụtara maka nwanyi?
ọ maara na ọ dị mkpa ịrata ụmụ nwoke;
nwere ohere imebi ndụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ma chọpụta ndị enyi ọhụrụ na-ahapụghị ezinụlọ.
Nye nwoke, mmekọrịta dị otú ahụ bụ:
ngosipụta nke mwute (ọ na-eweda ya ala mgbe ndị ọzọ jiri ngọzi ya);
nrụgide na-akpali agụụ mmekọahụ;
gbalịa ịzọpụta ezinụlọ (dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na di enweghị ike ime ka ịhụnanya daa na nkwarụ anụ ahụ).
Ndụ nke mmadụ na-adịghị etinye onwe ya n'àgwà edozi ma ọ dị mkpa ka a tụlee aro ụfọdụ tupu ị ghọọ sevvayf:
Ọ dị mkpa na di na nwunye na-akwado ọchịchọ nke otu.
Ị nwere ike iji nwayọọ mee ka mmekọrịta gị na ndị na-abụghị nwoke na-ahụ maka ịlụ gị: dozie nzukọ na cafe, tinye ụmụ nwoke, malite ịkpụgharị.
Ajụjụ na-esonụ bụ nhọrọ nke onye òtù ọlụlụ. Maka oge mbụ ọ bụ ihe na-achọsi ike ịnọ na onye a nwapụtara: onye ochie enyi ma ọ bụ onye hụrụ n'anya. N'ọdịnihu, ị nwere ike "ịbanye na ndò." Ọtụtụ swingers na seksvayf Fans na-achọ ụlọ ọrụ na forums na Ịntanetị. Nke a dị ize ndụ, ebe ọ bụ na onye amaghị, ma nzuzo.
Ọ dị mkpa ịkọwa oge a na-enyeghị ikike na nke a na-enweghị ikike tupu oge enwe mmekọahụ.
Esi mee nwunye seksvayf?
Mgbe ndị mmekọ abụọ ahụ kwadoro echiche efu - nke a dị mma, ma gịnị ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye adịghị etinye uche? Kedu ka esi mee ka nwunye ya gbanwee seksvayf? Mmeghachi omume na nyocha nwere ike ịbụ ihe ndị na-esonụ - site na nkwenye siri ike iji nweta ihu ọma. Ma ọ bụrụ na nwanyị kwenyere ịnwepụta, ma ọ bụ ihe dị iche iche, ma eleghị anya ọ bụ ihe dị ala na ùgwù na ejighị n'aka. Iji mezuo nkwekọrịta, ị ga - achọ ihe ndị a:
maka mmalite iji nye nkasi obi na nchebe n'ime ezinụlọ;
gbaa onye òtù ọlụlụ ume, nye ya onyinye, tinyere uwe ojii;
kwuo banyere ịhụnanya gị;
Iji mee ọnọdụ ka nwunye wee hụ na ọ ka di ya elu;
iji nwee mmasị na ya na ndị mmekọ ibe ya;
na-ekiri ihe nkiri porn, na-atụgharị aka ime mkpebi, ma ọ bụghị ikwu okwu banyere ọchịchọ ha.
Ihe nkiri banyere seksvayf
E nwere ọtụtụ ndị di na nwunye nwere obi ụtọ kpebiri na seksvayf. Ihe nkiri ụfọdụ na-ekwukwa banyere ihe ịga nke ọma, ọ bụ ezie na n'ụwa nke akụkọ ntụrụndụ, ihe niile dị iche na ndụ dị adị (ọbụna na fim ndị okenye na-enweghị akụkọ). Iji ghọta ihe subculture a kọwara, ị nwere ike ịlele ihe ngosi ihe nkiri banyere seksweif:
"Ikike maka ịkwa iko" , 2004. Nwunye ahụ na-arịọ nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ maka ikike iji gaa ije n'akụkụ.
"Nbanye" , 2002. Ndị ọkachamara na-akụzi na-amalite ịmalite amamihe nke ịhụnanya na otu.
"Ndị di na ndị hụrụ n'anya" , 1991. Egwuregwu egwu banyere atọ triangle ịhụnanya.
"Ụmụ nwanyị niile na-eme ya" , 1991. Klaasị nke ụdị na isiokwu nke di na nwunye na-eje ije.
"Fantasy" , 1976. Ọtụtụ akwụkwọ akụkọ banyere ihe efu nke ụmụ nwoke.
Nkwekọrịta maka ụmụ nwanyị mgbe afọ 40 gasịrị
Enwere m ike ime ime na condom?
Usoro nke miri emi
Gịnị kpatara anyị ji enwe mmekọahụ?
Kedu otu esi enweta orgasm mgbu?
Kedu ihe bụ nchacha?
Kedu ngwa ngwa iji mee ka nwoke ahụ nwee obi ụtọ?
Kedu ihe bụ rimming?
Esi mee ka mmadụ hụ gị n'anya?
Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ọ ga-atụrụ ime?
Kedu ka esi meju di ya?
Nwatakịrị ahụ adịghị ehi ụra n'abalị
Ugwu oyi maka ụmụaka
Kedu ka esi emeso nwatakiri egwu?
Kim Kardashian bụ onye na-ahụ ihe nchebe ghọrọ onye nche nke onye na-abụ abụ Fergie
Uwe na ifuru 2013
Ncha maka ịdị ọcha
Kombucha - uru bara uru na contraindications
Nri beeh shish kebab
Nlekọta maka ime ụlọ ahụ
Mmanụ Sesame maka ihu
Chọọchị St. John nke Nepomuk
Ravioli na ugu
Salad na squid - Ezi ntụziaka maka nri dị ụtọ
Supermodel Miranda Kerr ọzọ gbakọtara n'okpuru okpueze ahụ?
Gịnị ka ndị nwụrụ anwụ na-arọ nrọ?
Mbadamba iko na kichin
Kedu ihe na-atụ egwu - uru na nsogbu egwu na otu esi ewepu ya?